AMBOSITRA Lehilahy 4 tratra niaraka tamin’ny kojakoja famakian-trano
Lehilahy efatra no voasambotry ny polisy ao amin'ny kaomisarian'Ambositra ny sabotsy 29 febroary sy ny alahady 1 martsa teo noho ny resaka asan-jiolahy.
Angom-baovao marim-pototra no azon'ny polisim-pirenena fa misy andian-jiolahy mihaodihaody ao an-tampon-tanànan'Ambositra. Nidina ifotony avy hatrany ny polisy ka 3 lahy no vosambotra teo no ho eo ny sabotsy 29 febroary tao amina amina tokantrano iray tokony ho tamin'ny 6 ora maraina. Rehefa natao ny fisavana ny trano dia nahitana akanjona zandary miampy karazana fitaovana entina hamakiana trano ary fitaovana "electronique" maro samihafa tao. Nitohy ny famotorana ka fantatra ihany koa fa misy naman'ireto jiolahy ireto mbola mihaodihaody tao an-tampon-tanàna. Nanao ny vela-pandrika ny polisy ka tra-tehaka teny an-tsena ihany koa ny lehilahy iray naman'izy ireo tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Mitohy ny fanadihadiana hataon'ny polisy mahakasika azy ireo.